Lacag hel si aad ugu guurto Vermont sannadka 2022: Ka hel $ 10,000 Isla markiiba
Bogga ugu weyn Lacag hel si aad ugu guurto Vermont sannadka 2022: Ka hel $ 10,000 Isla markiiba
Isha sawirka: istock.com
Weligaa ma maqashay magaaladii lagu yaqaanay xilliga barafka? Gobolka Green Mountain halkaas oo dadku aad ugu soo dhoweeyaan soona dhaweeyaan dadka cusub? Magaaladu ma caan ku tahay sharoobada maple iyo nacnacyada sonkorta? Ma Maraykanka ayaa maankaaga ku soo dhacaya? Weyn! Waxaad haysaa wadadii saxda ahayd; ku soo dhawow sheekada gaaban ee sida lacag laguugu siiyo si aad ugu guurto Vermont.
Ii oggolow inaan ku baro, Vermont. Magaalo ku taal Maraykanka oo caan ku ah xilliga barafka, xaafadda diiran, iyo deegaanku waxay dareemaan inay ka fog yihiin buuqa magaalada ee maalin walba. Vermont waa dhulkii awoowayaasha Abenaki.
Magaalo si gaar ah loogu yaqaan xagaaga, dayrta, jiilaalka, iyo xiliyada dhoobada.
Si ka duwan xagaaga, dayrta, iyo xilliyada guga, jiilaalku wuxuu yeelan karaa baraf qurux badan. Sida aad u qaadan lahayd xoogaa gogo 'ah oo ah dhar diirran iyo gogol, ha iloobin inaad sidoo kale keento laba taayir oo baraf ah. Microspikes -ka qaarkood ayaa fududayn doona socodka barafka.
Xaqiiqda xiisaha leh, waxaad aadi kartaa barafka barafka ama barafka barafka subaxdii, mahadsanid jiilaalka!
Intaa waxaa dheer, Korontada oo go’an waa wax caadi ah waqtigan, laakiin qoryo qoryo ama koronto -dhaliye ayaa sameyn doona xeeladda! Tani waa inay ahaataa midda ugu yar ee welwelkaaga sababta oo ah warka wanaagsan ayaa ah in lagu siin karo lacag si aad ugu guurto Vermont.
Dadka Vermont waxay caan ku yihiin saaxiibtinimo. Waxay leeyihiin dad ka yar 70 qof halkii mayl laba jibaaran marka la eego sanadka 2018 taasoo la macno ah inaad had iyo jeer ka amaahan karto xoogaa kulayl deriskaaga. Laakin waa in aad mar hore xiriir la samaysatay.
Tani waxay tilmaamaysaa haddii aad raadinayso inaad u guurto Vermont, marar badan gacan qaado, oo ay ku siin karaan gacan gacan qabasho ah.
Sidoo kale, weydiinta reer Vermonter socod bahalnimo ah, ma dhaawici doonto. Sababtoo ah ma garanaysid goorta aad sidoo kale u baahan tahay caawimada. Had iyo jeer xusuusnow, diirimaadku waa inuu noqdaa mid dabiici ah, dhoola cadeyntaas oo si joogto ah u dheh salaan. Taasi waxay tidhi, aan dhex marno wax yar oo aad filan karto xagaaga.
Read: Lacag Bixin si aad ugu guurto New Zealand sanadka 2022: Hagaha Fudud ee lagu Sameeyo $ 165k
Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, dhinaca bari ee buurta, waxaad ka heli doontaa raadadka mid ka mid ah meelaha barafka ugu sarreeya ee Waqooyiga Ameerika, Sowe, raaxada Vermont ee xagaaga waa lagu daray.
Daqiiqad waxaad ku raaxaysan doontaa intaad ku jirto meesha ugu sarraysa gobolka, Mount Mansfield, buur 4,393-foot ah oo aan kaaga baahnayn inaad keento qalabkaaga fuulitaanka.
Waxa kale oo jira cunto gudaha laga beero oo la soo saaro. Laga soo bilaabo salool -gourmet ilaa sharoobada maple -ka caanka ah ee gobolka, biirka farsamada, iyo farmaajada, oo ay weheliyaan cider -ka adag ee adiga uun laguu sameeyay.
Kuwani waa waxoogaa faa'iidooyin ah inaad u guurto Vermont oo ay weheliso mushahar.
Sidoo kale akhri: Lacag ku bixi si aad ugu xayeysiiso Baabuurkaaga: 7 Shirkadood oo ku siin kara 2022
Fursadaha u -guuritaanka Vermont
Dhammaan ma bilaashbaa? Maya. Waxa wanaagsani waa, fursadaha waa badan yihiin.
Haddii aad ku raaxaysato raacitaanka baabuurkaaga, shaqada gudbinta cuntada ayaa noqon doonta taam ku habboon. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex safarto muuqaalka quruxda badan adigoo lacag kaash ah ku filan biilashaada iyo kiradaada.
U wadista Uber ama Lyft, waxay ku siin doontaa faa'iidada inaad si dhakhso leh u barato jidkaaga hodanka hodanka ah. Bal qiyaas tan, illaa 8,000 mayl oo waddo aan laami ahayn oo dhex marta buundo alwaax daboolan oo ku wareegsan caleenta xagaaga ama dayrta. Muuqaal muuqaal leh oo mudan in loo dhinto.
Laakiin haddii taasi aysan kuu gujin, dhowr fikradood ayaa si fiican u shaqeyn doona.
Qorista. Haa, qorista. Ogow waxa ay ka dhigan tahay? Waxaad si hagar la'aan ah uga shaqeysaa raaxada gurigaaga markaad daryeesho biilashaada. Ma awoodi kartaa inaad si fiican u shiiddo dhowr saacadood gudahood? Kaamil ah! Waxaad ku noolaan kartaa qoraal ahaan dhowr daabacadood.
Hadda aan kuu bilowno sida lacag laguu siiyo si aad ugu guurto Vermont.
Ma lagu siin doonaa lacag si aad ugu guurto Vermont?
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso "haddaba sababta dhab ahaan mushaarka laygu siinayo si aan ugu dhaqaaqo Vermont?" Waa kuwan sababaha.
Iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka magaalada. Inta badan Vermonters waa dad da' weyn. Heerka korriinka ayaa ah mid aad u gaabis ah. Sidaas darteed, waxay diiwaan geliyeen heerka dhalmada ugu hooseeya ee dalka, iyadoo dadka gobolka ay ku qiimeeyeen heerka labaad ee ugu hooseeya qaranka.
Iyada oo Vermont marqaati ka tahay hoos u dhac ku yimid shaqaalaha iyo saldhigga canshuurta oo sii yaraanaya, dawladda gobolka ayaa tan iyo markaas ku soo dhaweynaysay dad badan oo ka baxsan gobolka oo soo gala magaalada.
Dadka deggan badidoodu waa reer Vermonton cusub, marka waa inaad guriga joogtaa.
Iyada oo $ 10,000 oo dhiirigelin ah oo ay dawladdu ku doonayso in la qabto laga bilaabo sannadka 2019, ma doonaysid in aad seegto fursadda ah in aadan ku noolayn oo kaliya xaafad diirran, nabdoon, oo xiiso leh laakiin sidoo kale aan lahayn kharash eber ah.
Hadda ma aragtaa sababaha dadku lacag u helaan si ay ugu safraan Vermont?
Ma qaali baa in lagu noolaado Vermont?
Halkan waxaa ah xaqiiqo yar oo aad u baahan tahay inaad ogaato marka lacag lagu siiyo si aad ugu guurto Vermont. In kasta oo Vermont ay ka yar tahay meel u eg magaalo, kirada ayaa xoogaa sarreysa, sidoo kale sicirka suuqa, canshuurta hantida, iyo biilasha korontada.
Dadka doonaya inay tahriibaan waa inay taas ogaadaan. Waxaa laga yaabaa inaysan ku cabsi gelin, laakiin taxaddar yar ayaa muhiim ah.
Sidoo kale ka fiirso xawaaraha internet -ka oo hooseeya, gaar ahaan haddii Internet -ka deg -degga ah uu caawinayo shaqadaada. Miyaad dib uga fikiraysaa inaad u guurto Vermont? Xusuusnow, waxaa lagu siin doonaa lacag si aad ugu guurto Vermont.
Sida loo codsado deeqda guuritaanka Vermont
Fursad kasta oo dahabi ah waxay ku timaadaa kharash. Kharashaadka nolosha ayaa laga yaabaa inay xoogaa kaa nixiyaan, laakiin barnaamijka deeqda Vermont wuxuu halkan u joogaa inuu kaa yareeyo kharashyada dheeraadka ah.
Sababtoo ah codsiyo badan oo ka imanaya adduunka oo dhan si loogu guuro magaalada barafka, gobolka ayaa hadda deeqo siiya Vermonters-ka cusub marka ugu horreysa, marka ugu horreysa ee loo adeego.
Barnaamijku wuxuu dhigayaa dulucda shuruudaha u -qalmitaanka iyo a 4-tallaabo tallaabo samaynta codsigaaga. Waxaan kuu rajaynaynaa sida ugu wanaagsan marka aad sii waddo codsigaaga laakiin ha iloobin “waqtigu cidna ma sugo”. Fursadaada kaliya ee la hubo waa HADA.
Akhri: Waxaan rabaa in la i siiyo lacag si aan u guursado ajnabi sanadka 2022: 4 shay oo ay tahay inaad had iyo jeer ogaato
Tallaabooyinka sida lacag laguugu siiyo si aad ugu guurto Vermont
Iyadoo taas la leeyahay, halkan waxaa ku yaal dhawr tallaabo oo degdeg ah oo ku saabsan sida lacag laguugu siiyo si aad ugu guurto Vermont:
Ka dib marka la mariyo shuruudaha u -qalmitaanka ee ku Barnaamijka Weyn ee Dib -u -dejinta Shaqaalaha ee Cusub, oo aad xaq u leedahay, dhammaystir codsigaaga oo soo gudbi. Waxaa mudan in la xusuusto waa in codsiyadaan lagu kala soocayo marka hore, ugu horraysa ee loo adeego.
Intaas ka dib, waxaad u baahan doontaa inaad keento caddayn inaad u shaqayso urur ka baxsan Vermont iyo inaad u soo guurtay sidii degane Vermont.
Waxaad markaa heli doontaa magdhaw kharashyadaada. Deeqahaasi waxay daboolaan laakiin kuma koobna: kharashaadka dib-u-dejinta, kharashyada nolosha iyo shaqada, softiweerka kombiyuutarka iyo qalabka, internetka ballaarinta iyo helitaanka meel wada-shaqayn. Haddii aad xubin ka tahay barnaamijka, waxaad si fudud ugu baahan doontaa inaad soo gudbiso qaansheegtaada.
Vermont shaki kuma jiro in aqlabiyadda magaalada la siinayo lacag ay ugu soo guuraan, iyada oo lagu daray $ 10,000 dhiirigelin si kor loogu qaado intaad sii waddo raadinta xulashooyinka waara.
Laakiin ka fikir tan qorraxda diirran, dadka saaxiibbada leh, ka hadal muuqaalka muuqaalka leh, quruxda dabiiciga ah markaad fiiriso dheecaanka ka soo daadanaya geedaha maple ee la taabtay, masruufka la farsameeyay - dhammaantood waa gacantaada.
Su'aasha ugu weyni waxay tahay: diyaar ma u tahay in lacag laguu siiyo si aad ugu guurto Vermont? Hadday haa tahay, maxaad sugaysaa? $ 10,000 baa la isku haystaa, laakiin waqtigu wuu dhammaanayaa! Doorashada adigaa iska leh.
Lacag ku Bixi Sigaar -cabista: Samee In ka badan $ 5000/bishii 2022
Sida Lacag Loogu Helo Si Shaqada Guriga Dadka Kale Loogu Qabto | 10 Shabakadaha ugu Fiican 2022
Lacag hel si aad u akhrido Emailada: 20 Goobaha Bixinta ee Ku Bixiya
Siyaabaha Loo Bixiyo Lacag si aad u Dhagaysato Wicitaanada 2022
Immisa Aragti Ayaa Ka Qaadata In Lacag Lagu Sameeyo YouTube -ka | Dib u Eegid Buuxda
10 Software Maareynta Document -ka ugu Fiican 2022 -ka
Ma Kirayssan Kartaa Gaadhi Kaarka Debit Leh?
Dhammaanteen waan ognahay in habka ugu fudud ee lagu kiraysto baabuur uu yahay kaarka deynta. Maxaa dhacaya haddii…
Maxay ka dhigan tahay in dib loo maalgeliyo amaahda gurigaaga? | 2022
Haddaba su'aalo badan ayaa laga soo saaray gudaha Mareykanka sanadihii la soo dhaafay ee ku saabsan dib u maalgelinta. Dadka qaar ayaa…
14 Qalab Kobcin Ganacsi oo Bilaash ah 2022 | Skyrocket ganacsigaaga
Ganacsi kasta, si uun ama si kale, wuxuu ku dadaalaa kobcinta ama wuxuu leeyahay xeelado u gaar ah hirgelinta kobaca…
Sida Fudud Looga Baxo Waajibka Xeerbeegtida
Waajibka xeerbeegtida waa waajib inaad u adeegto gobolkaaga. Iyadoo ay tahay waajib iyo waajibaad u adeegid…
Sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii: 15 Siyaabood oo lagu sameeyo Lacag caddaan ah
Dhammaanteen waxaan rabnay lacag si sixir ah ugu soo muuqato akoonnadayada bangiga marka aan aad ugu baahanahay, taas oo…
9 Siyaabood oo aad lacag ugu sameysato Daabacaha 3D sanadka 2022 | Tusaha Ugu Dambeeya
Helitaanka daabacaadda 3D waxay beddeshay habka wax -soo -saarka dunidu u shaqayso, iyadoo u furtay habab cusub…
Waa maxay Kasbashada? Qeexid, dulmar, iyo sida ay u shaqeyso
Sidee Loo Bixiyaa Inta Lagu Jiro FMLA? Suurtagal ma tahay?
Ma ku heli kartaa Amarka Lacag Kaarka Debit? Sidee U Shaqeeya?
50 Siyaabood Oo Looga Helo Lacag Dheeraad Ah Dhinaca
Sida Loo Helo Dulsaarka Crypto: Ribada iyo Dakhliga